YEYINTNGE(ကနဒေါ): Thursday, June 19
It’s considered un-sportsmanlike to kickaperson when they’re down.
This is especially true when the fallen is suchaselfless person as Juana Tejada.
Juana isananny who isaclient of my firm and her story was first published in the Toronto Star on June 9th.
In 1995, this nanny left her home in the Philippines to work abroad so that she could support her family, including her six siblings. For eight years, she worked hard looking after other people’s children so that she could support her relatives back home.
In 2003, she arrived in Canada under our Live-in Caregiver Program (“LCP”).
The deal under the LCP is that nannies must provide at least two years of service to one or more Canadian families within the first three years of their arrival here. If so, they can apply for permanent residence.
It’sapretty good deal for both. We Canadians get someone to look after our kids while we are off at work. In turn, the nanny getsanew life here.
Since they will be looking after young children or the elderly, nannies must passafull medical test before they are issuedawork permit under this program. Once they complete their two years of service, they must undergo medicals again as part of the processing of the permanent residence application.
Accordingly -- unlike any other category of immigrants -- nannies have to undergo and pass more than one medical.
Tragically, after faithfully serving Canadian families for two years, Juana underwent her second medical only to discover that she has cancer and onlyafive per cent chance of surviving another five years.
What does the LCP offer her for upholding her end of the bargain? The refusal of her application.
How about her request forabit of that world-famous Canadian compassion?
“While I am sympathetic to your situation, I am not satisfied that these circumstances justify granting an exemption” she was told inaletter from CIC.
This is not the first time we have seen suchaproblem.
In 2004, another Filipino nanny, Laila Suan Elumbra, came to Canada and just two months before completing her two years of service in Montreal, she suffered an attack of porphyria and fell intoafour-month coma. She was unable to complete her service within the time allowed and was ordered to leave Canada in August 2006. Luckily for her, she was landed in February 2008 but only after marryingaCanadian citizen and thereby qualifying for an exemption to our usual medical requirements.
Afteraflurry of media exposure last week, Juana and her husband were issued temporary resident permits that will expire in six months (two weeks before Christmas). They were also given work permits -- primarily so that her husband can work and contribute to some of the costs of her medication.
While welcome, this development is notasolution as Juana will, in all likelihood, still be sick in six months and will still be inadmissible to Canada. The government might be hoping that the media and the public will forget about Juana by Christmas. However, I would rather believe that our government will be using this time to seekasolution to the double jeopardy created by the LCP.
There is no question that because of our universal health care system, Canada should be very careful about admitting anyone who may likely placeaburden on this system.
However, in the case of nannies, once they have passed medicals and spent two years working and paying taxes here, we should not be singling them out forasecond round of exams that can only disclose illnesses which they could not have been aware of at the time of their arrival.
It seems to me that we simply cannot claim as damaged goodsananny who has given us two to three years of her life on grounds that are tragic and beyond her control.
If we did, what kind of sportsmanship will we be teaching our kids?
BY YeYint Nge ... 6/19/20080comment Links to this post
Ontario butts out smoking in vehicles with kids
Ontario became the latest Canadian province to ban smoking inavehicle withachild present yesterday afteragovernment-backed private member's bill passed in the legislature with the support of all three parties.
“This is about protection of our most vulnerable citizens — children who do not haveavoice,” Best told the legislature.
Nova Scotia and British Columbia have already outlawed the practice, which critics liken to child abuse. Health care groups who lobbied hard foraban praised the province for taking the right steps to protect children's health.
ကရင်တိုင်းရင်းသား ဒုက္ခသည် နောက်ထပ် ၁,၃၀၀ ကနေဒါ လက်ခံမည်
မြန်မာနိုင်ငံက ကရင်တိုင်းရင်းသား ဒုက္ခသည် ၁,၃၀၀ ကို ကနေဒါနိုင်ငံက လက်ခံမယ်လို့ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်း အသေးစိတ်ကို ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
အခုလို မြန်မာနိုင်ငံက ကရင်တိုင်းရင်းသားဒုက္ခသည်တွေကို လက်ခံမယ်ဆိုပြီး ကနေဒါနိုင်ငံ နိုင်ငံသားနဲ့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန၀န်ကြီး ဒိုင်ယန်း ဖင်းလေး (Diane Finley) က ကြေညာလိုက်တာပါ။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်နဲ့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အကြား ကနေဒါနိုင်ငံအနေနဲ့ နောက်ထပ် ကရင်ဒုက္ခသည်တွေကို ထပ်ပြီးလက်ခံမယ်လို့ ပြောဆိုတာပါ။
ကရင်တိုင်းရင်းသား ဒုက္ခသည်တွေဟာ ၁၉၉၅ ခုနှစ် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ကေနန်ယူရဲ့ ဌာနချုပ်ကို မြန်မာစစ်အစိုးရတပ်တွေ တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကတည်းက အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံထဲကို ဘေးလွတ်ရာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့ ကနေဒါနိုင်ငံ လူဝင်မူကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကရင်တိုင်းရင်းသား ဒုက္ခသည် ၁၄၀,၀၀၀ ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံက ကရင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ လောက် နေခဲ့ရတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်က အဆိုးဝါးဆုံး အခြေအနေအောက်မှာ နေထိုင်ရပ်တည်နေရတဲ့ ကရင်တိုင်းရင်းသား ဒုက္ခသည်တွေကို ကနေဒါအနေနဲ့ လက်ခံကြိုဆိုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အကူအညီ အလိုအပ်ဆုံးသူတွေကို အကူအညီပေးခွင့် ရတဲ့အတွက် ကနေဒါနိုင်ငံ ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက် ဂုဏ်ယူသင့်တဲ့အကြောင်း ကနေဒါနိုင်ငံ နိုင်ငံသားနဲ့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဒိုင်ယန်း ဖင်းလေးက ပြောဆိုပါတယ်။
ကနေဒါနိုင်ငံအနေနဲ့ ကရင်တိုင်းရင်းသား ဒုက္ခသည် ၄,၀၀၀ သူ့နိုင်ငံထဲမှာ လက်ခံပြီး အကာအကွယ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်း ပြောဆိုပါတယ်။
ဒီလို ကရင်တိုင်းရင်းသား ဒုက္ခသည်တွေကို လက်ခံတာနဲ့ပတ်သက်လို့ CFOB မြန်မာ့မိတ်ဆွေ ကနေဒါနိုင်ငံသားများအဖွဲ့ အမှုဆောင်ညွန်ကြားရေးမှူး ဦးတင်မောင်ထူးက အခုလိုပြောပါတယ်။
“ကနေဒါအစိုးရအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက တိုင်းရင်းသားဒုက္ခသည်တွေကို လက်ခံခဲ့တာဟာ ၂၀၀၆ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်လက်ခံခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကတော့ လူပေါင်း ၈၀၀ ကိုလက်ခံခဲ့တာပါ။ ပြီးတဲ့နောက် သက္ကရာဇ် ၂၀၀၇ နဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွေမှာ ဒုက္ခသည် ၂,၀၀၀ လောက် လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ အခုတခါ ထပ်ပြီးတော့ ၁,၀၀၀ ကျော်ကို လက်ခံမယ်ဆိုတာဟာ အင်မတန်မှ ကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေလို့ ကျနော်တို့က မြင်ပါတယ်။ ကြိုလည်း ကြိုဆိုပါတယ်။
“ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်မှာ ဒုက္ခသည် ၁၀၀,၀၀၀ ကျော် ရှိနေပါတယ်။ သူတို့တတွေ နေထိုင်ရတဲ့ဘ၀တွေ အထူးသဖြင့် ကလေးတွေရဲ့ အနာဂတ်ဟာ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ အခြေအနေကို ရောက်နေပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ကနေဒါအစိုးရရဲ့ မြန်မာပြည်အပေါ် အာရုံစူးစိုက်မှုနဲ့ တကယ့်လက်တွေ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေ ကူညီဆောင်ရွက်မှုကို ပြသရာရောက်တယ်လို့ ကျနော်တို့ မြင်ပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာ ဒုက္ခသည်တွေ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အနာဂတ်ကိုလည်း တဖက်ကနေ ပြန်ပြီးတော့ မြှင့်တင်ပေးတယ်လို့ ကျနော်တို့က ယူဆပါတယ်။”
CFOB မြန်မာ့မိတ်ဆွေ ကနေဒါနိုင်ငံသားများအဖွဲ့ အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးတင်မောင်ထူး ပြောပြသွားတာပါ။
ကနေဒါနိုင်ငံက အရာရှိတွေဟာ မကြာသေးခင်ကပဲ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်က ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို သွားရောက်ခဲ့ပြီး ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်က အခြေအနေတွေကို လေ့လာခဲ့တယ်လို့ ကနေဒါ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကနေဒါကိုရောက်လာတဲ့ ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ ကနေဒါနိုင်ငံတ၀န်း အခြေချနေထိုင်နေကြသလို သူတို့ရပ်တည်နေနိုင်အောင် ကနေဒါမှာရှိတဲ့ ဘာသာရေးနဲ့ လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့တွေက ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့အကြောင်းလည်း ကြေညာချက်ထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
နိုင်ငံတကာအကူအညီ အပြည့်အ၀မရမှု နိုင်ငံရေးပြဿနာကြောင့်ဟု အန်အယ်လ်ဒီ ပြောကြား
ပီတာအောင်/ ၁၉ ဇွန် ၂၀၀၈
လေဘေးကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာအကူညီ လုံလောက်စွာ မရသည်မှာ နိုင်ငံရေးပြဿနာကြောင့်ဖြစ်သဖြင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်နှင့်် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမြန်ဆုံးခေါ်ယူပေးရန် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အန်အယ်လ်ဒီက တောင်းဆိုသည်။
မုန်တိုင်းကြောင့် လူပေါင်းသိန်းချီသေဆုံးပြီး ကျွဲ၊ နွား၊ လယ်ယာမြေနှင့် ဆေးရုံ၊ ကျောင်းစသည့် အခြေခံ အဆောက်အုံများ ပျက်စီးကာ ဆုံးရှုံးမှုပမာဏ ကြီးကြီးမားမား ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊ နိုင်ငံမှာ စီးပွားရေး ချွတ်ခြုံကျနေပြီး ပြည်သူလူထုမှာလည်း ဆင်းရဲမွဲတေနေကြောင်း၊ ပြန်လည်ထူထောင် ရေးအတွက် တဦးတဖွဲ့တည်းဖြင့် ဆောက်ရွက်နိုင်စွမ်းမရှိဘဲ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀န်းထံမှ ငွေကြေးနှင့်နည်းပညာအကူအညီ အမြောက်အမြားလိုအပ်နေကြောင်း အန်အယ်လ်ဒီ၏ ယမန်နေ့ အထူးကြေညာချက်တွင် ပါရှိသည်။
အန်အယ်လ်ဒီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးဖြစ်သူ ဦးသိန်းညွန့်က “ဘယ်လိုပဲပြောပြော လက်တွေ့ တကယ်တမ်းကတော့ ဗမာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကြောင့် နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေ ထိထိ ရောက်ရောက် ရသင့်သလောက် မရတဲ့အပြင် အင်မတန်မှရဖို့ အလှမ်းဝေးနေတယ်။ အဲဒီအခြေ အနေဟာ ဗမာပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ဖို့ လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာ ဖော်ပြနေတယ်” ဟု ပြောသည်။
နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ဆောင်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းသည် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရသည့် နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများနှင့် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများအကြား အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဆွေးနွေးရန်နှင့် ပြည်သူ့ဆန္ဒကို လေးစားကြောင်းပြသသည့် အနေဖြင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကို အမြန်ဆုံးခေါ်ယူပေးရန် လေးနက်စွာထပ်မံတောင်းဆိုကြောင်း အန်အယ်လ်ဒီက ပြောသည်။
မုန်တိုင်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် တိုင်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊ နအဖစစ်အစိုးရနှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်ရန် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က အဆင်သင့်ရှိသည်ဟုလည်း ဦးသိန်းညွန့်က ပြေားသည်။
မြန်မာ့လေးဘေး ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် နိုင်ငံတကာမှထည့်ဝင်ရန် ကတိပြုထားသည့် အလှူငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း (၂၁၀) အနက် (၈၂) သန်းသာရရှိကြောင်း ကုလသမဂ္ဂက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။ ။
အန်အယ်လ်ဒီ၏ လွှတ်တော်ခေါ်ရန် တောင်းဆိုချက်အပေါ် သဘောထားကွဲပြား
NEJ/ ၁၉ ဇွန် ၂၀၀၈
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမြန်ဆုံးခေါ်ယူပေးရန် တောင်းဆိုမှုသည် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သည့်ကိစ္စတခုကို လုပ်ခြင်းဖြစ် သည်ဟု မြန်မာပြည်ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်အဖွဲ့ချုပ် (DAB) က ပြောသည်။
လေဘေးကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာအကူအညီ လုံလောက် စွာမရသည်မှာ နိုင်ငံရေးပြဿနာကြောင့်ဖြစ်သဖြင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ခေါ်ယူရန် အန်အယ်လ်ဒီက ယမန်နေ့တွင် အထူးကြေညာချက် ထုတ်ြပန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ယင်းသို့ လွှတ်တော်ခေါ်ယူရန် တောင်းဆိုသည့်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ DAB အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာကျော်ညွန့်က “အန်အယ်လ်ဒီက ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်မှာ ပြည်သူလူထုရဲ့ ထောက်ခံမှု ရရှိ ထားတဲ့ အနိုင်ရပါတီဖြစ်ပါတယ်။ သူလုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကို လုပ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။ နောက်တချက်က နာဂစ်ကိစ္စဟာ ဘယ်လိုအခြေအနေပဲကြည့်ကြည့် ကယ်ဆယ်ရေး အခြေ အနေဟာ လုံလောက်မှုမရှိဘူးဆိုတာ အားလုံးသိတယ်။ နအဖရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေ အားလုံးကို ပြန်ကြည့်ရင် အခုထိ စနစ်ကျတဲ့ ချဉ်းကပ်မှုမျိုး ဘာတခုမှမတွေ့ရဘူး။ ဒါကြောင့် အန်အယ်လ်
ဒီက လွှတ်တော်ခေါ်ယူဖို့ တောင်းဆိုထိုက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ မြင်တယ်။ ” ဟု ပြောသည်။
အန်အယ်လ်ဒီ၏ ပြီးခဲ့သည့် (၂) နှစ် (၃) နှစ်က ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းကို ပြန်ကြည့်ပါက စစ်တပ်ကို လုံးဝအာဏာစွန့်ရန် ပြောဆိုခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ လွှတ်တော်တရပ်ကနေပြီး တရားဝင်
လုပ်နိုင်ရန် ထိန်းကျောင်းနိုင်သည့် အနေအထားမျိုးကို ပြောင်းလဲပေးမည်ဆိုသည့် ကမ်းလှမ်း ချက်မျိုးရှိခဲ့ဖူးသည်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
“ဒါဟာ တိုင်းပြည်အတွက် နိုင်ငံရေး အမြော်အမြင်ရှိမှုပါပဲ။ ဒီလိုအမြော်အမြင်ရှိမှုအားလုံးကို နအဖ ဘက်က ပယ်ချခဲ့တာဖြစ်တယ်။ လုပ်မပေးခြင်းသည် နအဖရဲ့တာဝန်သာဖြစ်တယ်။ တောင်းဆိုတာ ဟာ မှန်ကန်တဲ့တောင်းဆိုမှုဖြစ်တယ်လို့ပဲ မြင်တယ်” ဟု ဒေါက်တာကျော်ညွန့်က ပြောသည်။
ရန်ကုန်အနောက်တိုင်းသံတမန်တဦးကမူ အန်အယ်လ်ဒီသည် ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ၊ နောက်ဆက်တွဲ ဖမ်းဆီးမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ခံစားထိုက်သည်မှန်သော်လည်း လက်ရှိအခြေအနေရ အတိတ်၏ ခါးသီးမှုများကို မကြည့်တော့ဘဲ ပိုကောင်းမည့်အနာဂတ်ကိုသာ ကြည့်သင့်သည်ဟု ခေတ်ပြိုင်ကို ပြောသည်။
မုန်တိုင်းဒဏ်ထိသည့် ကိစ္စအတွက် လွှတ်တော်က ဖြေရှင်းမပေးနိုင်၊ တာဝန်ရှိသည့် အစိုးရများ၊ ပညာရှင်များ၊ အလှူရှင်များ၊ လုပ်အားပေးများကသာ ဖြေရှင်းနိုင်မှာ ဖြစ်သည်ဟု ဥရောပအခြေစိုက် အနောက်တိုင်း သံတမန်တဦးကလည်း ခေတ်ပြိုင်ကို ပြောသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ ၀ါရှင်တန်ဒီစီမြို့မှ မြန်မာအရေးအကဲဖြတ်သူ ဦးတင်မောင်သန်းကမူ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အပြောင်းအလဲသည် စစ်တပ်ကနေချပေးသည့် အပြောင်းအလဲသာ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီကို သွားနေသည့် လမ်းကြောင်းတွင် အပြောင်းအလဲသည် တချို့ နိုင်ငံများတွင် တွေ့ရသကဲ့သို့ အပေါ်ကချပေးသည့် အပြောင်းအလဲသာဖြစ်နိုင်သည်ဟု ဦးတင်မောင်သန်းက ပြောသည်။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၊ တော်လှန်ရေး၊ သဘောတူညီချက်နှင့် အပေါ်ကချပေးခြင်းဟူသည့် အပြောင်း အလဲပုံစံ (၄) ခုအနက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမ (၃) ခုမှာ မဖြစ်နိုင်ဘဲ အပေါ်က ချပေးခြင်းပဲဖြစ်မယ်။ အကန့်အသတ်များနှင့်သွားသည့် အပေါ်ကချပေးခြင်းသာဖြစ်နိုင်သည်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
“အဲဒီလမ်းကြောင်းကို ရွေးပြီးသားဖြစ်တယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြောနေတာ သဘော တူညီချက်နဲ့ပြောင်းတဲ့ အပြောင်းအလဲကို ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ အဲဒါဟာ ပယ်ချထားပြီးသား ဖြစ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပြောင်းလဲဦးမယ်ဆိုရင်တောင် အဲဒီအပြောင်းအလဲဟာ စစ်အစိုးရက ချပေးတဲ့ အပြောင်းအလဲပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါက တကယ့်အဖြစ်၊ တကယ်သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းလို့ မြင်တယ်” ဟု ဦးတင်မောင်သန်းက ပြောသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြောနေသည်မှာ (၂) ဦးသဘောတူပြီး ပြောင်းလဲသည့် အပြောင်း အလဲမျိုးဖြစ်သည့်အတွက် ဖြစ်သင့်သည့်ဒေါင့်က ပြောမည်ဆိုပါက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ခေါ်ယူရန် တောင်းဆိုမှုသည် ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်ကြောင်း၊ သို့သော် တကယ့်ဖြစ်နေသည့် ဒေါင့်က ပြောမည်ဆိုပါက စစ်အစိုးရချပေးသည့်လမ်းကိုသာ သွားရလိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခင်ကလည်း မဖြစ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့် ယခုလည်း ဖြစ်မည်မဟုတ်ကြောင်း ၎င်းက သုံးသပ်သည်။
အန်အယ်လ်ဒီသည် ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရပါတီဖြစ်သည့်အတွက် ဥပဒေကြောင်းအရ လွှတ်တော်ခေါ်ရန် တောင်းဆိုနိုင်သည်။ သို့သော် မြန်မာစစ်အစိုးရက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို တဘက်သတ် အနိုင်ယူပြီး ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲသစ် လုပ်မည်ဆိုသည့်အတွက်
၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို စစ်အစိုးရက မကြေညာဘဲ တရားဝင်ပယ်ဖျက်လိုက်သည့်သဘော ဖြစ်သည်ဟု ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးသမားအချို့က ပြောသည်။
ယခင်ကလည်း အလျင်းသင့်တိုင်း လွှတ်တော်ခေါ်ယူရေး တောင်းဆိုခဲ့ဖူးသည့် အန်အယ်လ်ဒီ၏ ယခုအချိန် တောင်းဆိုမှုသည် အချိန်ကိုက်အခါကိုက် ဟုတ်မဟုတ်ဆိုသည့်အပေါ် ရန်ကုန် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အချို့ကြား သဘောထားကွဲပြားမှု ရှိနေသည်ဟု စုံစမ်းသိရသည်။ ရန်ကုန်နိုင်ငံရေးသမားအချို့ကလည်း အင်အားမရှိဘဲ ကြေညာချက်ထုတ်သည်ဟု ယူဆကြောင်း ပြောသည်။
သို့သော် ယင်းသို့ အန်အယ်လ်ဒီက တောင်းဆိုလိုက်မှုကြောင့် သက်ရောက်မှုအနေနှင့် စစ်တပ် တွင်းရှိ တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်ပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့် စဉ်းစားစရာကိစ္စအဖြစ် ရှုမြင်လာမည်ဖြစ်ပြီး နအဖ အနေနှင့်လည်း ယင်းကိစ္စအပေါ် ဖိနှိပ်မှုပြင်းထန်လာမည့် အနေအထားရှိကြောင်း၊ သို့သော် နောက်ဆုံးတွင် အာဏာရှင်များသည် ၎င်းတို့၏ နိဂုံးချုပ်ကို ဦးတည်သွားရသည်သာဖြစ်သည်ဟု
DAB အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာကျော်ညွန့်က သုံးသပ်သည်။
၁၉၉၈ ခု သြဂုတ်လ (၂) ရက်နောက်ဆုံးထားပြီး စစ်အစိုးရဘက်က လွှတ်တော်ခေါ်ပေးရန်
၁၉၉၈ ခု မေလ (၂၈) ရက်နေ့မှာ အန်အယ်လ်ဒီက တောင်းဆိုခဲ့ဖူးသည်။ မကြာခင် ၁၉၉၈ ခု
ဇူလိုင် (၂၄) ရက်၊ (၂၉) ရက်နှင့် သြဂုတ် (၁၂) ရက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရန်ကုန်ပြင်ပ ခရီးစဉ်များကို နအဖဘက်က နှောင့်ယှက်ခဲ့သည်။ နအဖဘက်က လွှတ်တော်ခေါ်မပေးသည့်အပြင် နိုင်ငံရေးသမား အများအပြားကို ဖမ်းဆီးမှုများလုပ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၆ ခု ပြည်ထောင်စုနေ့ကလည်း လွှတ်တော်ခေါ်ပေးရန် နှစ်ဆန်း (၁) ရက် နောက်ဆုံးထားပြီး စစ်အစိုးရက အကြောင်းပြန်ရန် အန်အယ်လ်ဒီက အထူးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုခဲ့ဖူးသည်။
ဒေါ်စုမွေးနေ့ အန်အယ်လ်ဒီ အဖွဲ့ဝင်များ ရိုက်နှက် ဖမ်းဆီးခံရ
အေးလဲ့ ဇွန် ၁၉၊ ၂၀၀၈
ရန်ကုန်မြို့ ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(အန်အယ်လ်ဒီ) ရုံးချုပ်ရှေ့တွင် ယနေ့နံက်ပိုင်းက အန်အယ်လ်ဒီ အဖွဲ့ဝင်များကို လုံထိန်းရဲနှင့် စစ်အစိုးရ အထောက်အပံ့ပြုထားသူများက ရိုက်နှက် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း သိရသည်။
နံနက် ၁၁ နာရီခန့်တွင် အန်အယ်လ်ဒီ အဖွဲ့ဝင်များ ရုံးရှေ့၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၆၃ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် ငှက်များလွှတ်ပြီး ဆုတောင်းမေတ္တာပို့နေစဉ် လူ အင်အား ၃၀၀ ခန့်ရှိ ရဲများ၊ ကြံ့ဖွံ့များ၊ စွမ်းအားရှင်များက ဒိုင်နာ ကား ၁၀ စီး ခန့်ဖြင့် ရောက်ရှိလာပြီး ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးရာ အဖွဲ့ဝင်၎ ဦးခန့် ဖမ်းဆီး ခံ ခဲ့ရကြောင်း အန်အယ်လ်ဒီ ပြန်ကြား ရေးအဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာ ဝင်းနိုင်ကပြောသည်။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းဆုကြည်ရဲ့ မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့ ရုံးချူပ်ရှေ့မှာအဖွဲ့ဝင်တွေက ငှက်လွှတ်ရင်းနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်ုးစုကြည် ကျန်းမာပါစေ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမြန်လွှတ်ပေးလို့ ကြွေးကြော်တယ်၊ ဒီအချိန်မှာ စွမ်းအားရှင်၊ ကြံ့ဖွံ့တွေက ရုံးရှေ့ပလက်ဖောင်း အထိ ကားမောင်းလာပြီး အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင် ၄ ယောက်ကို ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်” ဟု ဒေါက်တာ ဝင်းနိုင်က ပြောပြသည်။
ဖမ်းဆီးခံရသူ များမှာ ဦးထွန်းမြင့် (ဗဟန်းမြို့နယ် အတွင်းရေးမှူး) ၊ ဦးလှအေး(လှိုင်သာယာ မြို့နယ် စည်းရုံး ရေးအဖွဲ့ဝင်)၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်မှ အန်အယ်လ်ဒီ လူငယ်တဦးနှင့် အမျိုးသမီးတဦး(အမည်မသိရသေး) တို့ ဖြစ် ကြောင်းနှင့် ဖမ်းဆီးစဉ် ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် အမျိုးသမီးတဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟုလည်း၎င်းက ဆိုသည်။
အခင်းဖြစ်ပွားပြီး၍ ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်ခန့်တွင် အာဏာများပိုင်ဘက်မှ ဗဟန်ုးမြို့နယ် ရပ်မိရပ်ဘ ဦးစိုးတင့်၊ ဦးရဲအောင်၊ ဦးတင်မြင့်၊ ဦးဇော်တင့်တို့ လေးဦးက အန်အယ်လ်ဒီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးစိုးမြင့်၊ ဦးသန်း ထွန်း၊ ဒေါက်တာဝင်းနိုင်၊ ဦးလှသိန်း၊ လူငယ်တာဝန်ခံ ကိုခင်ထွန်းတို့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည်ဟု လည်း ဒေါက်တာ ဝင်းနိုင်ကပြောသည်။
ယင်းသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် အာဏာပိုင်များဘက်က နောက်ထပ် အဖမ်းအဆီးများမရှိကြောင်း၊ ဥပဒေဘောင် အတွင်းမှ ထိန်းသိမ်း လုပ်ဆောင်ရန် ပြောဆိုကြောင်း၊ ယခုဖမ်းဆီးထားသူများ၏ လက်ရှိအခြေအနေကို မူ မသိရှိသေးကြောင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များကို ပြောဆိုပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လမ်းပိတ်ထားသည်ကိုလည်း ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေး မည်ဖြစ်ကြောင်း တို့ကို ဆွေးနွေး ပြောဆိုသွားသည်ဟု ဆိုသည်။
နံနက်ကတည်းကပင် အာဏာပိုင်များက အဖွဲ့ချုပ်ရုံးအနီး လင့်လမ်းမှစ၍ ရွှေဂုံတိုင်ထိပ်အထိကားလမ်း မကို ပိတ်ဆို့ထားပြီး ဝတ်စုံအပြည့်နှင့် လုံထိန်းကား ၇ စီး၊ အချူပ်ကား ၁ စီး၊ မီးသတ်ကား ၁စီး၊ လုံခြုံရေး ကွပ် ကဲ ရေးအဖွဲ့ကား ၅ စီးတို့ရှိ နေကာ အဖွဲ့ချူပ်ရုံး လမ်းထိပ်တွင်လည်း ဒိုင်နာကား၁၀စီး တို့ဖြင့် စောင့်ကြပ်၍ လုံခြုံရေး တင်ကြပ်ထားကြောင်း သိရသည်။
ယနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မွေးနေ့ကို အခမ်းအနားအနေဖြင့် မပြုလုပ်သော်လည်း အန်အယ်လ်ဒီ လူမှု အထောက် အကူပြုအဖွဲ့က အကျဉ်းကျ နိုင်ငံရေသမားများ၏ မိသားစုဝင်များကို ပညာသင်စရိတ် ထောက်ပံ့သည့် အစီအစဉ်ရှိသော ကြောင့် အဖွဲ့ချုပ်ရုံးအတွင်း၌ လူအင်အား ၆၀၀ ခန့်ရောက်ရှိနေကြောင်းလည်း သိရသည်။ အန်အယ်ဒီ ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ် ဦးဥာဏ်ဝင်းက“ဒီနေ့ ကျနော်တို့ အခမ်းအနား လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ အလှူဒါနလုပ်တယ်၊ ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်တယ်၊ အဲဒါကို ကျနော်တို့ကို အနှောင့် အယှက်ပေးတာ၊ လာတားမြစ်တဲ့သူတွေက ဗုဒ္ဓဘာသာမှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့” ဟု ပြောသည်။
၎င်းက ဆက်လက်ပြီး“ဒီလို နေ့မျိုးမှာ ကျနော်ပြောချင်တာကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းဆုကြည်ဟာ နိုင်ငံတကာ ကချီးမြင့်တဲ့ ဆုပေါင်း ၈၅ ဆု ရထားပါတယ်၊ တကြိမ်တခါမှ ဘာပြစ်မှုမှ ကျူးလွန်ခြင်းမရှိခဲ့ဘဲနဲ့ ၁၂နှစ်ကျော် အချိန်အထိ အဖမ်းအဆီးခံ ထားရတာဟာ လုံးဝတရားမျှတမှု မရှိဘူး၊ ကျနော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတယောက် အနေနဲ့ အလှူအတန်းလုပ်တာကို အနှောင့် အယှက်ပေးခံနေရတာဟာ အလွန်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်၊ အလွန်တရားမဲ့လွန်းတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်” ဟုလည်း ပြောာသည်။
အန်အယ်လ်ဒီ ရုံးချုပ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၆၃ နှစ်မြောက် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် ယနေ့ နံနက် အစောပိုင်း ကစတင်ပြီး သံဃာတော်များနှင့် သီလရှင်အပါး ၁၀၀ ခန့်ကို တန်းဆွမ်းလောင်းခြင်း၊ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းတချို့သို့ ဆွမ်းဆက်ကပ်ခြင်းများ စသည့် အလှူဒါနများကို စီစဉ်ပြုလုပ်ရာ အန်အယ်လ်ဒီ ရုံးသို့ ကြွရောက်ရန် ပင့်ဖိတ်ထားသော သံဃာတော်များကို အာဏာပိုင်များက တားဆီး ပိတ်ပင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တခြားသော တောင်ကြီးမြို့၊ မန္တလေးမြို့တို့ရှိ အန်အယ်လ်ဒီ အဖွဲ့ဝင်များကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက် ကျန်းမာစွာဖြင့်အချူပ်အနှောင်မှ လွတ်မြောက်ရန် ဆုတောင်းမတ္တာပို့ခြင်း၊ မိဘမဲ့ကျောင်းများသို့ အလှူအတန်းပြုလုပ်ခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း အန်အယ်လ်ဒီ အဖွဲ့ဝင်များက ပြောသည်။ [Top]
အလောင်းမြေမြှုပ်၍ အဖမ်းခံရသူများတွင် ဗကသ ကျောင်းသားများပါဝင်
ကိုသက် ဇွန် ၁၉၊ ၂၀၀၈
နာဂစ် မုန်တိုင်းကြောင့် အသက်ဆုံးပါးသွားပြီး မရှင်းလင်းနိုင်သေးသည့် လူသေအလောင်းများကို ဧရာဝတီတိုင်း ဘိုကလေး မြို့နယ်အတွင်း လိုက်လံမြေမြှုပ်သင်္ဂြိုဟ်သူ ၇ ဦး ယခုလ ၁၄ ရက်နေ့က အဖမ်းခံရရာ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသား သမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (ဗကသ) အဖွဲ့ဝင် ၅ ဦး ပါဝင်သည်ဟု ၎င်းတို့နှင့်အတူ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သည့် လုပ်သားတဦးက ပြောသည်။
အဖမ်းခံရသူ ၇ ယောက်တွင် အလောင်းကောက်သင်္ဂြိုဟ်သည့်အဖွဲ့ကိုဦးဆောင်သည့် မြန်မာထရီဗြွန်းဂျာနယ် ထုတ်ဝေသူ ဦးအောင်ကျော်ဆန်းနှင့် ဒေါက်တာ နေ၀င်းတို့အပါအ၀င် ဗကသ အဖွဲ့မှ ကိုလင်းထက်နိုင်၊ မနှင်းပွင့်ဝေ၊ ကိုဟိန်းရာဇာထွန်း တို့ပါဝင်ပြီး အခြားသူများ၏အမည်များ မသိရသေးပေ။ ဒေါက်တာ နေ၀င်းသည် မနှင်းပွင့်ဝေ၏ ဖခင်ဖြစ်သည်။
“ဘိုကလေးကအပြန် ဖျာပုံမှာ မှတ်ပုံတင်စစ်ရင်းနဲ့ အဖမ်းခံရတာ၊ ဖျာပုံကနေမှ ရန်ကုန်ကိုလွှဲလိုက်တယ်လို့ ကြားတယ်။ သူတို့ကားမှာ ၁၆ ယောက်လောက်ပါတာ ကားမောင်းတဲ့လူတွေ ဘာတွေ ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်” ဟု ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားက ပြောသည်။
ဗကသ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသည့် ကိုလင်းထက်နိုင်နှင့် မနှင်းပွင့်ဝေတို့သည် ၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ လှုပ်ရှားမှုပြီးကတည်းက အာဏာပိုင်တို့၏ မတရားလိုက်လံဖမ်းဆီးမှုကြောင့် ရှောင်တိမ်းနေရသူများ ဖြစ်ကြသည်။
ဗကသ အဖွဲ့ဝင်တချို့သည် လုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့် ရှောင်တိမ်းနေကြသော်လည်း နာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ပြီး နောက်ပိုင်း ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို အဆင်သင့်သလို လုပ်ကိုင်နေကြကြောင်း သိရသည်။
ဗကသ အဖွဲ့၏ တာဝန်ရှိသူတဦးက “ပြီးခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ဘိုကလေးကို အလောင်းမြှုပ်တဲ့အဖွဲ့ကိုလိုက်ကူရင်း အပြန်မှာ အဖမ်းခံရတာ။ ဒါပေမယ့် အစကတည်းက ကျနော့်တို့က ပြည်သူတွေအတွက်ပဲ လုပ်ခဲ့ကြတာလေ … ရသလောက်တော့ ဆက်လုပ်သွားမှာပါ” ဟု ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ယခုလအတွင်း စစ်အစိုးရက နိုင်ငံကျော် လူရွှင်တော် ဇာဂနာ၊ အားကစားအယ်ဒီတာ ဇော်သက်ထွေး၊ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများနှင့် ဗကသ အဖွဲ့ဝင်များအပါအ၀င် မုန်တိုင်းကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ဆောင်နေသူ ၂၀ ခန့်ကို အကြောင်းပြချက် တစုံတရာမပေးဘဲ ဖမ်းဆီးထားသည်။
ဖမ်းဆီးမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ “နာဂစ်ကယ်ဆယ်ရေးအတွက် စစ်အစိုးရလိုချင်သလောက် ပိုက်ဆံကို နိုင်ငံတကာ ဆီက လည်းမရ၊ တဘက်က အမှောင်ချထားတဲ့သတင်းတွေကလည်း အပြင်ကိုရောက်၊ ပုဂ္ဂလိကအလှူရှင်တွေ တာဝန်ယူသလို လည်း အစိုးရကတာဝန်မယူနိုင်ဆိုတော့ သူတို့သိက္ခာကျတာပေါ့ … အဲဒီတော့ တကယ်လုပ်နေတဲ့လူတွေကို မဲတာပေါ့ဗျာ” ဟု ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားအဖွဲ့၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ကိုထွန်းမြင့်အောင်က ပြောသည်။
မောင်ဝိတ် အဖမ်းခံနေရဆဲ ဖြစ်ဖွယ်ရှိ
ကြာသပတေးနေ့၊ ဇွန်လ 19 2008 12:51 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ မူးယစ်ဆေးဝါး ဖောက်ကားမှုတွင် ပတ်သက်သည်ဆိုသော စွပ်စွဲချက်ဖြင့် ခေါ်ယူ မေးမြန်းခြင်း ခံခဲ့ရသည့် လူငယ် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် မောင်ဝိတ်သည် အထိန်းသိမ်းခံနေဆဲ ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ရသည်။စစ်အစိုးရ ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်များနှင့် သဟဇာတဖြစ်သူ အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ် မောင်ဝိတ်နှင့် မိသားစု ကုမ္ပဏီ လီမိတက်၏ မန်းနေးဂျင်း ဒါရိုက်တာ မောင်ဝိတ်ကို မူးယစ်မှုဖြင့်ပင် စစ်ဆေးခံရသည့် ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်၏သား အောင်ဇော်ရဲမြင့်ကို ဖမ်းဆီးပြီးနောက် နှစ်ရက် အကြာတွင် ဖမ်းဆီးခဲ့သည်ဟု သတင်းရပ်ကွက်များက ပြောသည်။မဇ္ဈိမက ရန်ကုန်မြို့ လမ်းမတော်လမ်းရှိ မောင်ဝိတ်နှင့် မိသားစု ကုမ္ပဏီ လိမိတက်သို့ ဖမ်းဆီးထားသည် ဆိုသော သတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ် အတည်ပြုချက် ရယူရာ ကောလဟလသာ ဖြစ်ပြီး ကျိုက်လတ်မြို့နယ်တွင် နာဂစ်ဆိုင်ကလုံးဒဏ်သင့် ဒုက္ခသည်များအတွက် ကျန်းမာရေး ၀န်ဆောင်မှုနှင့် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်လျှက် ရှိသည်ဟု ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။သို့သော် ကျိုက်လတ်တွင် မောင်ဝိတ် ရောက်ရှိနေခြင်း ရှိ မရှိ မဇ္ဈိမ အထောက်တော်များက သွားရောက် စုံစမ်းခဲ့ရာ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် လုပ်ငန်း များ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေသော်လည်း ရောက်လာခဲ့ခြင်း မရှိဟု ၀န်ထမ်းများက ပြောသည်။ ရာထူးမြင့် စစ်တပ် အသိုင်းအ၀ိုင်း အပြောအရ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာန လက်အောက်ခံ နေရာတခုတွင် ထိန်းသိမ်းခံထားရသည်ဟု ဆိုသည်။ ယခင်ကလည်း မောင်ဝိတ်ကို စစ်ဆေးပြီး ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်သည် ဆိုသော သတင်းများ ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ဖယ်ရှားခံလိုက်ရသော ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်းဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွှန့်နှင့် ရင်းနှီးသူဖြစ်သည့် မောင်ဝိတ်ကို စွဲချက်တင်မည်ဟု စစ်ခေါင်းဆောင် များနှင့် နီးစပ်သည့် သတင်းရပ်ကွက်များက ပြောသော်လည်း မည်သည့် အမှုဖြင့် စွဲချက်တင်မည်ကို မဇ္ဈိမအနေဖြင့် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပါ။မောင်ဝိတ်သည် စစ်ဘက်ရေးရာ လုံခြုံရေးဌာန အကြီးအကဲ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်ဆွေ၏ တူမဖြစ်သူ မယဉ်မင်းခင်ကို လွန်ခဲ့သည့် လအနည်းငယ် အတွင်း မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်းပေါင်း ၁ သိန်းပေးကာ ကွာရှင်းထားသူ ဖြစ်သည်။ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်ဆွေသည် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၏ ဇနီး ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်နှင့်လည်း ဆွေမျိုးတော်စပ်ပြီး ယခင် ထောက်လှမ်းရေး အကြီးအကဲ ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွှန် နောက်ပိုင်း တန်ခိုး ထွားလာသူလည်း ဖြစ်သည်။ အောင်ဇော်ရဲမြင့်ကို ဖမ်းဆီးသော အမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မဇ္ဈိမက သတင်းဦး ထုတ်ပြန်ပြီး ဖြစ်သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် အောင်ဇော်ရဲမြင့်ကို ပြန်လည် ပြုပြင်ရေး စခန်းတခုတွင် ပို့ထားကာ မူးယစ်ဆေး ဖြတ်လျက် ရှိသည်။ယခုကဲ့သို့ စစ်အစိုးရ အသိုင်းအ၀ိုင်း၊ ရုပ်ရှင်မင်းသား မင်းသမီးများ အပါအ၀င် ရုပ်ရှင်နယ်ပယ်မှ လူ ၂ ဒါဇင်ခန့်ကိုပါ ခေါ်ယူ စစ်ဆေးမှု ပြုလာခဲ့သည်။နာမည်ကျော် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် မနန္ဒာလှိုင်နှင့် ကိုဇေသီဟတို့၏ မေလအတွင်းက ပြုလုပ်ခဲ့သော မင်္ဂလာဆောင် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက် ရန် ကာယကံရှင်များက နိုင်ငံတော် အေးချမ်း သာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ၏ နံပါတ် ၃ အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်းကို သွားရောက် ဖိတ်ကြားမှုပြုရာမှ အစပြုခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ မဇ္ဈိမက ကိုဇေသီဟရှိရာ မြရိပ်ညိုဟိုတယ်သို့ ဆက်သွယ် အတည်ပြုချက် ရယူရာတွင် ကိုဇေသီဟက တယ်လီဖုံး လာရောက်ကိုင်ကာ ဆဲရေးပြီး ဖုံးချသွားသည်။မင်းသမီးများကို အာမခံဖြင့် ပြန်လွှတ်ပေးထားခြင်းမှာ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်ဆန်း၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်ဟု ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီး ဌာန သတင်းရပ်ကွက်က ပြောသည်။ နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ် ဒုက္ခသည်များအတွက် ရန်ပုံငွေ ရှာရန် ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနက ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံးဝင် မင်းသား မင်းသမီးများဖြင့် ဗီဒီယို ၆ ကားကို ရိုက်ကူးလျှက် ရှိသည်။
ဒီချုပ် ရုံးအတွင်း ကြံ့ဖွံ့များ ဝင်ပြီး လူ ၄ ဦး ဖမ်းဆီး
ကြာသပတေးနေ့၊ ဇွန်လ 19 2008 13:03 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၆၃ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ အခမ်းအနား ကျင်းပမည့် ရန်ကုန်တိုင်း ဗဟန်းမြို့နယ် ရွှေဂုံတိုင်လမ်းရှိ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးအတွင်း ကြံ့ဖွံ့များ ဝင်ရောက်စီးနင်းကာ သံဃာတပါးနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ် ၃ ဦးကို ဖမ်းဆီးသွားသည်။ ပြီးခဲ့သည့် နာရီပိုင်းက စွမ်းအားရှင်များသည် တားဆီးနေသည့် ကြားကပင် အခမ်းအနား ကျင်းပမည့် အချိန်ကို စောင့်ဆိုင်းနေသည့် အဖွဲ့ချုပ်ဝင် ၇ဝဝ ခန့်ရှိရာ ရုံးဝင်းအတွင်း ဝင်ရောက်ကာ အခမ်းအနား တက်ရောက်သူများထဲက သံဃာတော်တပါးနှင့် လူ ၃ ဦးကို ဖမ်းဆီးသွားခြင်း ဖြစ်သည်။“ဆွမ်းလောင်းပြီးတော့ ငှက်တွေ လွှတ်တယ်။ လူတွေက အော်တာပေါ့။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာပါစေလို့။ အဲဒါ စွမ်းအားရှင်တွေ ရောက်လာတယ်။ ၄ ယောက်လောက်တော့ ပါသွားတယ်။ ဦးထွန်းမြင့်၊ ဘုန်းဘုန်းတပါးရယ်၊ နောက် ၂ ယောက်ရယ်” ဟု အဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရသူ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။ အဖွဲ့ချုပ် လူငယ်တဦးက “လုံခြုံရေး ချထားတယ်။ ဝင်ဖမ်းမှာ စိုးလို့။ ဝင်ဖမ်းတာဗျ။ စွမ်းအားရှင်ကားတွေနဲ့ ရုံးအရှေ့မှာ ရပ်လိုက်ပြီးတော့ ဝင်ဖမ်းတယ်။ အခု အရင်နေတဲ့ ရွှေတိဂုံဘုရားဘက်ကို သွားတဲ့ကွေ့မှာ ပြန်ရပ်နေတယ်။ ထောက်လှမ်းရေးတွေလည်း သူ့နေရာမှ ပြန်နေနေ ကြတယ်” ဟု ပြောသည်။ ရုံးအနီးတွင် လက်နက်ကိုင် လုံထိန်းတပ်သား၊ ရဲနှင့် ကြံ့ဖွံ့ စုစုပေါင်း ဦးရေ ၁ဝဝဝ ခန့် လုံခြုံရေး ချထားသည်။“အားလုံးပေါင်း ၁ ထောင်လောက် ရှိတယ်။ ဒိုင်နာတွေနဲ့ဆို ၅-၇ ကားရှိတယ်။ ရဲကားတွေလည်း အများကြီး” ဟု အဖွဲ့ချုပ် လူငယ်က ပြောသည်။ ဦးဉာဏ်ဝင်းကလည်း “မနက်က ဆွမ်းလောင်းပါတယ်။ သံဃာတွေရော၊ မယ်သီလရှင်တွေရော ဆွမ်းလောင်းပါတယ်။ ရုံးပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ လုံခြုံရေး အကြီးအကျယ် ချထားပါတယ်။ လက်နက်ကိုင် လုံထိန်းကား ၄-၅-၆ စီး ရှိတယ်။ အရပ်ဝတ်နဲ့ လူတွေလည်း အများကြီး ချထား ပါတယ်” ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။နံနက်ပိုင်းတွင် သံဃာနှင့် သီလရှင် ၂ဝဝ ကျော်ကို ဆွမ်းကပ် လှူပြီးကတည်းက အာဏာပိုင်များနှင့် အန်အယ်ဒီ အဖွဲ့ဝင်များအကြား ထိပ်တိုက် တွေ့မှုများဖြစ်နေပြီး ယခု သတင်းပေးပို့ချိန်အထိ အဖွဲ့ရုံးကို ယာယီ ပိတ်ထားရသည်။ အဖွဲ့ချုပ် လူငယ်တဦးက “အခု ရုံးတွေပိတ်ထားရတယ်။ ခဏ။ ဆွမ်းကျွေးဖို့ ရှိတယ်။ ဘုန်းဘုန်းတွေကို အင်္ဂါနေ့တိုင်း ဆွမ်းလောင်းတာတွေ ဘာတွေ လုပ်ပြီးသွားပြီ။ ဆွမ်းကျွေးမလို့၊ မကျွေးရသေးဘူး” ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ မဇ္ဈိမက နောက်ဆုံး ဆက်သွယ်သည့် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၂ နာရီခွဲအထိ အာဏာပိုင်များနှင့် အန်အယ်ဒီ လူကြီးများ အကြားတွင် ညှိနှိုင်းနေဆဲ ဖြစ်သည်။မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ၁ဝ နာရီခွဲ - ၁၁ နာရီခန့်တွင် သံဃာ ၅ ပါးကို နေ့ဆွမ်းကပ်ရန် ဖိတ်ကြားထားသော်လည်း အာဏာပိုင်များက တားမြစ်သဖြင့် မကြွရောက်နိုင်ဟု ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။
ဒီချုပ် ရုံးချုပ်ရှေ့ စစ်အစိုးရ လုံခြုံရေးများ တိုးမြှင့်
ကြာသပတေးနေ့၊ ဇွန်လ 19 2008 15:53 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ အန်အယ်ဒီ ရုံးချုပ်တွင် ယနေ့ ကျင်းပသည့် ပါတီ ခေါင်းဆောင်၏ မွေးနေ့ အခမ်းအနား ပြီးဆုံးသွားသော်လည်း လုံခြုံရေးကိုမူ ဆက်လက် တင်းကျပ်ထားဆဲ ဖြစ်သည်။
နံနက်ပိုင်းက ရဲ၊ လုံထိန်း၊ ကြံ့ဖွံ့၊ စွမ်းအားရှင် အင်အား ၁ဝဝဝ ခန့် ချထားစဉ် ကြံ့ဖွံ့များက ပါတီရုံးဝင်းအတွင်း အတင်းအကျပ် ဝင်ရောက်ကာ သံဃာတော် တပါးနှင့် ပါတီဝင် ၃ ဦးကို ဝင်ရောက် ဖမ်းဆီးပြီးနောက် အခမ်းအနား ဆက်လက် ကျင်းပရာ နေ့လယ် ၂ နာရီတွင် ပြီးဆုံးခဲ့ သော်လည်း အာဏာပိုင်များဘက်က လုံခြုံရေးကို ဆက်ချထားဆဲပင် ဖြစ်သည်။
အဖွဲ့ချုပ် လူငယ်တဦးက “လုံခြုံရေး အခြေအနေက သူတို့ဘက်က မလျှော့ဘူး။ တထောင်ကျော်တော့ ရှိမယ်။ ကြံ့ဖွတ်တွေရော၊ စွမ်းအားရှင် တွေရော၊ ရဲတွေရော။ အုတ်လမ်းဘက်၊ ရွှေတိဂုံဘက်မှာ ပိုဆိုးတယ်။ အဲဒီမှာ ပြည်ထဲရေးဌာန ဓမ္မာရုံ ရှိတယ်။ အဲဒီမှာ လုံထိန်း အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းရေးတပ်တွေ တပ်စွဲထားတယ်။ ဒိုင်နာကားက ၁ဝ စီး ကျော်တယ်။ ကျန်တဲ့ ကားကြီးတွေတော့ ရွှေတိဂုံ ဘုရားဘက်မှာ ဖျောက်ထား တယ်” ဟု ပြောသည်။ ထိပ်တိုက်တွေ့မှု ဖြစ်မည် စိုးရိမ်သဖြင့် အဖွဲ့ချုပ်ရုံးဝင်းကိုမူ ခေတ္တ ပိတ်ခဲ့ရသေးသည်။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ထင်ရှားသော နေရာများဖြစ်သော မြို့တော်ခမ်းမ၊ ရွှေဂုံတိုင်၊ မြေနီကုန်း၊ လှည်းတန်းဘက်တွင်လည်း လုံခြုံရေးများ ထူထပ်စွာ ချထားသည်ဟု မြို့ခံတဦးက ပြောသည်။
“လူတွေက သုံးယောက်တွဲနေပြီး စောင့်ကြည့်ကြတယ်။ ရဲကားတန်းရှည်လည်း ကင်းပတ်နေတယ်။ လူထုကို ခြောက်ပြတဲ့ သဘောပါ။ ဒေါ်စု အိမ်ရှေ့လမ်းကိုလည်း အင်အား ဖြည့်ထားတယ်” ဟု အဆိုပါ မျက်မြင်တဦးက ပြောသည်။
မြို့အနှံ့တွင် ဒိုင်း၊ ဒုတ် ကိုင်ထားသော ရဲသား ၃ဝ ခန့်ပါသော ကားများလည်း လှည့်နေပြီး ကုန်သည်ကြီးများ ဟိုတယ် တဝိုက်တွင် အရပ်ဝတ်များ စောင့်ကြည့်နေသည်ဟု အဆိုပါ မြို့ခံက ဆိုသည်။
ယနေ့ နံနက်ပိုင်းက အဖွဲ့ရုံးဝင်း အတွင်းသို့ စွမ်းအားရှင်များ ဝင်ရောက်ကာ ရုံးလုံခြုံရေး ယူထားသော လူငယ်များကို ဖမ်းဆီးခဲ့သေးသည်။
မနက်က အဖွဲ့ချုပ်ရုံးအတွင်း ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ မျက်မြင်သက်သေ တဦးက “ဝင်ဆွဲသွားတယ်။ ရုံးရှေ့မှာ၊ ကားတွေ အတင်းထိုးရပ်ပြီးတော့ ဒိုင်နာကားတွေ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်အတွက် ဆုမွန်ကောင်း တောင်းတဲ့ လူတွေကို အတင်းဆွဲသွားတာ၊ တချို့ မြို့နယ်က လူတွေက ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ ရုံးထဲ ဝင်ပြေးကြတာပေါ့။ ရုံးမှာ အမြဲတမ်း လုပ်နေတဲ့ လူငယ်တွေက လုံခြုံရေးတာဝန် ယူထားတော့ သူတို့ကို ဆွဲတင်သွားတယ်” ဟု ပြောသည်။
ပရိသတ် ၇ဝဝ ခန့် တက်ရောက်သော အခမ်းအနားတွင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား မိသားစုများမှ ကလေးငယ်များအတွက် ပညာသင် ထောက်ပံ့ကြေး ပေးသည့် အစီအစဉ်တခု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျောင်းသားအရွယ် ကလေးငယ် ၇၄ ဦးကို တဦးလျှင် ငွေကျပ် ၃ သောင်းနှင့် စာရေးကိရိယာများ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
မွေးနေ့ ဆွမ်းကပ်လှူမည့် ပန္နိတရာမ ကျောင်းတိုက် (ရွှေတောင်ကုန်း သာသနာ့ရိပ်သာ) မှ သံဃာ ၅ ပါးကို ဆွမ်းကပ်လှူမည့် အစီအစဉ်မှာ ဆွမ်းချိန် နှောင်းသွားသဖြင့် အထမမြောက်တော့ပါ။ သံဃာတော်များကို ဆွမ်းစား မကြွရောက်ရန် အာဏာပိုင်များက ဖိအားပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ ဆုတောင်းသူ အန်န်အယ်လ်ဒီလူငယ်တွေ အဖမ်းခံရ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် အန်န်အယ်လ်ဒီရုံးချုပ်ရှေ့တွင် သံဃာတော်များအား ဆွမ်းလောင်းလှူနေစဉ်။ဇွန် ၁၉၊ ၂၀၀၈။ဒီကနေ့ကျရောက်တဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့၆၃ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်အန်န်အယ်လ်ဒီရုံးရှေ့မှာအန်န်အယ်လ်ဒီအဖွဲ့ဝင်တချို့ ငှက်လွှတ်ပြီး ဆုတောင်းခဲ့ကြတဲ့အချိန် အရပ်ဝတ်နဲ့လူတွေ ကားတွေနဲ့ရောက်လာပြီး အတင်းဝင်ရောက် ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အတွက် အန်န်အယ်လ်ဒီအဖွဲ့ဝင်တချို့ အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီနေ့အန်န်အယ်လ်ဒီ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာ ဆွမ်းကပ်လှူဖို့ သံဃာတော်တွေကို စီစဉ်ခဲ့ပေမယ့် အာဏာပိုင်တွေက သံဃာတော်တွေ မကြွရဘူးလို့လည်း ပိတ်ပင်တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဘန်ကောက်ရောက် ဗွီအိုအေ၀ိုင်းတော်သား ကိုကျော်ကျော်သိန်းက တင်ပြပေးထားပါတယ်။ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ၆၃ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကို အခမ်းအနားကြီးတခုအနေနဲ့ လုပ်တာမဟုတ်ဘဲ ကုသိုလ်ကောင်းမှု တခုအနေနဲ့သာ ပြုလုပ်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် အာဏာပိုင်တွေကတော့ ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတာကိုပဲ ဟန့်တားခဲ့တယ်လို့ အန်န်အယ်လ်ဒီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့က အခမ်းအနားမဟုတ်ဘူး။ မွေးနေ့ကို အလှူဒါနပြုတယ်၊ ကုသိုလ်ကောင်းမှု ပြုပေးတာပါ။ မနက်ပိုင်းက ကျနော်တို့ တန်းဆွမ်းလောင်းပါတယ်။ သံဃာတွေရော၊ သီလရှင်တွေရော ကြွရောက်တာတွေကို ရုံးရှေ့မှာလောင်းပါတယ်။ နေ့ခင်းကတော့ သံဃာငါးပါးပင့်ပြီး ဆွမ်းကြွေးဖို့ အစီအစဉ် လုပ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအစီအစဉ်ကို သက်ဆိုင်ရာတွေက သံဃာတော်တွေ မကြွနိုင်အောင် တားထားတဲ့အတွက် ရုံးမှာ ဆွမ်းကြွေးတာကိုတော့ မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး။”
ဒါ့အပြင် အန်န်အယ်လ်ဒီရုံးချုပ် တည်ရှိရာ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရွှေတိဂုံတိုင်လမ်း ပတ်ဝန်းကျင်တလျှောက် လုံခြုံရေး တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ချထားခဲ့ပါတယ်။
“ရုံးပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း အကြီးအကျယ် လုံခြုံရေးချထားတယ်။ လုံထိန်းက လက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့ အများကြီးပဲ။ အရပ်ဝတ်တွေနဲ့လည်း အများကြီးပဲ။ အဖွဲ့ချုပ်က ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတာကို အဲဒီလိုလုပ်နေတဲ့အတွက် ဒါလေး ပြောချင်တာပါ။”
သံဃာတော်တွေက ရုံးချုပ်ကို ကြွမလာနိုင်ကြတဲ့အတွက် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေဆီကိုပဲ လှူဘွယ်ဆွမ်းဟင်းတွေ ပေးပို့ကပ်လှူခဲ့ရတယ်လို့ အန်န်အယ်လ်ဒီ ဗဟို သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာဝင်းနိုင်က ပြောပါတယ်။ အဲဒီနောက် ရုံးရှေ့မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ဖြစ်ပြီးခါစအချိန်လေးမှာပဲ ဒေါက်တာဝင်းနိုင်က ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
“ရှေ့မှာ ကျနော်တို့ အခမ်းအနားပေါ့၊ ငှက်တွေဘာတွေလွှတ်တယ်။ လွှတ်တဲ့အချိန်မှာ ကြံ့ဖွံ့တွေနဲ့ စွမ်းအားရှင်တွေ ဒိုင်နာကား ဆယ်စီးလောက်နဲ့ ကျနော်တို့ရုံး ပလက်ဖောင်းပေါ်ကို တက်ပြီးတော့ ၀င်ဆွဲလို့ နှစ်ယောက်ပါသွားတယ်။ ကျနော်တို့ဘက်ကတော့ ရုံးအ၀မှာပဲ လုံခြုံရေးချထားတယ်။ အဲဒီအထဲကကို ကင်မရာမင်း ကိုထွန်းမြင့်၊ ဗဟန်းမြို့နယ် အတွင်းရေးမှူးကို ဘေးနားက ၀ုန်းဝုန်း ၀ုန်းဝုန်းနဲ့ ဆင်းလာပြီး အုပ်စုနဲ့ ၀ိုင်းဆွဲတင်သွားတယ်။ ဒီမှာတော့ အခု ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်နေတာပေါ့။”
အဲဒီအဖြစ်အပျက်အတွင်း ကိုယ်တိုင်ရှိနေခဲ့တဲ့ အန်န်အယ်လ်ဒီအဖွဲ့ဝင် လူငယ်တဦးကလည်း အခုလိုပြောပြပါတယ်။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ဖို့ တောင်းဆိုတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာပါစေဆိုပြီး ဆုတောင်းပွဲတွေလုပ်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ကျနော်တို့ရုံးရှေ့ကို ဒိုင်နာကားငါးစီးနဲ့ စွမ်းအားရှင်တွေ ရောက်လာတယ်။ ကားတစီးမှာ လူအနည်းဆုံး ၆၀၊ ၇၀ လောက်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း ၃၀၀ လောက်ရှိတာပေါ့။ ကျနော်တို့ ဗဟန်းမြို့နယ်က ကိုထွန်းမြင့်ကို ဖမ်းသွားတယ်။ နောက် အင်းစိန်မြို့နယ်က ကိုဟန်ရှိန်ကို ဖမ်းသွားတယ်။ကျနော်တို့ဆီက ရဟန်းတပါးကို ကားပေါ်တင်ပြီး ဖမ်းသွားတယ်။ နောက် အမျိုးသမီးတဦးနဲ့ အားလုံး လေးဦးဖမ်းသွားတယ်။”
ဗွီအိုအေက ထပ်ပြီး ဆက်သွယ်မေးမြန်းတာတွေအရ အဖမ်းခံရသူပေါင်းဟာ လေးဦးထက်မနည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ လှိုင်သာယာမြို့နယ် အန်န်အယ်လ်ဒီဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှအေး၊ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်နေသူ ဗဟန်းမြို့နယ် အန်န်အယ်လ်ဒီ အတွင်းရေးမှူး ကိုထွန်းမြင့်၊မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် အန်န်အယ်လ်ဒီအဖွဲ့ဝင် ကိုမောင်မောင်ရှိန်နဲ့ အမည်မသိ သံဃာတော်တပါးလည်း ပါဝင်တယ်လို့ အန်န်အယ်လ်ဒီ လူငယ်အဖွဲ့ဝင်တဦးက ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
အန်န်အယ်လ်ဒီအဖွဲ့ဝင်တွေက ဆူဆူပူပူ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်အောင် ဘာမှလုပ်ဆောင်တာ မရှိဘဲနဲ့ကို အခုလို အရပ်ဝတ်နဲ့လူတွေက ၀င်ဖမ်းခဲ့ကြတာပါလို့ ဒေါက်တာဝင်းနိုင်က ဆိုပါတယ်။
“ကျနော်တို့ကတော့ ကျနော်တို့လူတွေကို ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းတယ်။ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးချင်တဲ့အခါကျတော့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ရင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မွေးနေ့ပွဲကြီးက သေးသိမ် မှေးမှိန်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ဘက်မှာလည်း အများကြီး ထိခိုက်သွားနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ကတော့ ကျနော်တို့လူတွေကို ထိန်းသိမ်းတယ်။ ဘာမှ မပြောဘူး၊ မဆိုဘူး၊ လုံခြုံရေးတွေ ကျနော်တို့ရှေ့မှာလူငယ်တွေ ချထားတယ်။”
အခုလို သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူ အာဏာပိုင်တွေက ဖမ်းဆီးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ အရပ်ဝတ် ၀တ်ထားတဲ့ အရပ်သားတွေက ဖမ်းဆီးတာမျိုးဟာ ဥပဒေကြောင်းအရ ဘယ်လိုမှ ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့ ဒေါက်တာဝင်းနိုင်က ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အန်န်အယ်လ်ဒီဘက်ကတော့ ဥပဒေကြောင်းအရပဲ ဆက်လုပ်သွားပါမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ဘက်ကတော့ ဥပဒေကြောင်းအရပဲ သက်ဆိုင်ရာကို မေးရမြန်းရမှာပေါ့။ သူတို့ကို ဘယ်ခေါ်သွားတယ်။ ဘယ်သူတွေ ခေါ်သွားတယ်၊ စသဖြင့်ပေါ့။ ဒါလည်း ဒီလိုစွမ်းအားရှင်တွေက ၀င်ရောက် ဖမ်းပိုင် ဆီးပိုင်ခွင့်ဆိုတာ ဥပဒေအရ မရှိဘူး။ ဒါဟာ တမင်တကာ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုကို ဖန်တီးတယ်လို့ပဲ ကျနော်တို့ကတော့ သုံးသပ်တယ်။လက်ရှိအားဖြင့် လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေမှ မဟုတ်တာ။ စစ်တပ်တို့၊ ရဲတို့၊ လုံထိန်းတို့၊ အက်စ်ဘီတို့ ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေမှ မဟုတ်တာ။ သူတို့က အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပဲ။သူတို့အနေနဲ့ အရပ်ဖက် ဖွဲ့ထားတဲ့ လူမှုရေးအဖွဲ့တွေလို့ နာမည်ခံထားတဲ့ အဖွဲ့တွေပဲ။ ဒီကိစ္စမှာ သူတို့အနေနဲ့ လူတွေကိုဝင်ပြီး ဖမ်းဟယ်ဆီးဟယ်လုပ်ဖို့ ဘာမှအကြောင်းမရှိဘူး၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်လည်း မရှိဘူး။”အန်န်အယ်လ်ဒီ ဗဟိုပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာဝင်းနိုင်ပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ မေလ ဒီပဲယင်းအကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်ပြီးကတည်းက နေအိမ်မှာ အကျယ်ချုပ် ထိန်းသိမ်းခံထားရတာကြောင့် အခုကာလအတွင်း မွေးနေ့ပေါင်း ၆ ခုကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဘ၀နဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရပြီးပါပြီ။ သူ့ကိုလွှတ်ပေးဖို့ ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာက ၀ိုင်းဝန်းတောင်းဆိုတာတွေ ဆက်လက်ထွက်ပေါ်နေဆဲပါ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာအစိုးရကတော့ ဒီတောင်းဆိုမှုတွေအားလုံးကို မျက်ကွယ်ပြုပြီးပြီးခဲ့တဲ့လကုန်ကပဲ နောက်ထပ် အကျယ်ချုပ်သက်တမ်းတနှစ် ထပ်တိုးခဲ့ပါတယ်။
ဒုက္ခသည်တွေအတွက် အဆိုးဆုံးနေထိုင်ရာအဖြစ် ထိုင်းနိုင်ငံ သတ်မှတ်ခံရ
ကမ္ဘာတလွှား ဒုက္ခသည်တွေနေထိုင်နေရတဲ့ အဆိုးဆုံးနေရာ ဆယ်နေရာထဲမှာ ထိုင်းနိုင်ငံလည်း တခုအပါအ၀င် ဖြစ်တယ်လို့ ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ဒုက္ခသည်အခြေအနေဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာအသစ်တခုမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံတွင်းခိုလှုံနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ဒုက္ခသည်တွေပေါ်မှာ ဆိုးရွားတဲ့ ပြုမူဆက်ဆံပုံတွေကြောင့် အခုလို အဆိုးရွားဆုံး နေရာတခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရတာလို့ အစီရင်ခံစာပြုစုတဲ့ ဒုက္ခသည်နဲ့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများဆိုင်ရာ အမေရိကန်ကော်မတီ (USCRI) ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဘန်ကောက်ရောက် ဗွီအိုအေ၀ိုင်းတော်သား ကိုကျော်ကျော်သိန်းက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံဟာ မြန်မာဒုက္ခသည် ထောင်ပေါင်းများစွာကို အတင်းအကျပ်ပြန်ပို့တာ၊ နိုင်ငံတွင်းမှာရှိနေတဲ့ မြန်မာဒုက္ခသည် အများအပြားကို ဒုက္ခသည်တွေအဖြစ် အသိအမှတ်မပြုတာ၊ ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ လူတွေကိုကျတော့လည်း ဒုက္ခသည်စခန်းတွေထဲကနေ အပြင်ထွက် အလုပ်လုပ်ခွင့်မပေးဘဲ ကုန်လှောင်ရုံတွေမှာ ကုန်သိုလှောင်သလို ပိတ်ထားတာ၊ ဒါ့အပြင် လာအိုနိုင်ငံက မုန်းလူမျိုးဒုက္ခသည် ၈,၀၀၀ လောက်ကို သံဆူးကြိုးတွေ ကာရံထားတဲ့ စခန်းတခုထဲမှာ ပိတ်ထည့်ထားပြီး ပြန်ပို့ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတာ စတဲ့အချက်တွေကြောင့် ဆိုးရွားတဲ့နေရာတခုဖြစ်တယ်လို့ USCRI ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
USCRI က ပြုစုတဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည် အခြေအနေဆိုင်ရာ စစ်တမ်းမှာ ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတခုချင်းစီရဲ့ စွမ်းဆောင်မှုတွေကို ကဏ္ဍလေးခုခွဲ ဆန်းစစ်ထားပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ ဒုက္ခသည်တွေကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ပေးမှု၊ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှု၊ လွတ်လပ်စွာ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာခွင့်နဲ့ နေထိုင်ခွင့်တွေရှိမှု၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်ကနေ ၀င်ငွေရရှိမှုဆိုတဲ့ ကဏ္ဍတွေပါပဲ။
ဒီကဏ္ဍလေးခုမှာ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ စွမ်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး USCRI ရဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး မစ္စ ဒါရက်စ် ချူဆရီ (Ms. Dares Chusri) က…
“၂၀၀၇ ခုနှစ်စစ်တမ်းမှာတုန်းက ထိုင်းနိုင်ငံဟာ ကဏ္ဍလေးခုမှာ D နှစ်ခုနဲ့ F နှစ်ခု ရခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ D တခုပဲရပြီး F က သုံးခုဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဆင့်ဟာ ဒီနှစ်မှာ ကျဆင်းသွားပါတယ်။” လို့ ပြောပါတယ်။
လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်နဲ့ နေထိုင်ခွင့်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဆင့် ကျဆင်းသွားရတာရဲ့ အဓိကအကြောင်းတွေထဲမှာ လည်တံရှည် ပဒေါင်လူမျိုး ဒုက္ခသည်တွေကို ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေကို ဆွဲဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကျေးရွာတခုမှာ အတင်းအကျပ် ရွှေ့ပြောင်းနေရာချထားခဲ့တာလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
အဆိုးဆုံးဆယ်နိုင်ငံထဲမှာ ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အတူပါဝင်တဲ့ တခြားနေရာတွေကတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ တရုတ်၊ ဥရောပနိုင်ငံတွေ၊ အိန္ဒိယ၊ အီရတ်၊ ကင်ညာ၊ မလေးရှား၊ ရုရှားနဲ့ ဆူဒန်နိုင်ငံတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံဟာ ၁၉၅၁ ခုနှစ် ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်၊ ၁၉၆၇ ခုနှစ် သဘောတူညီချက်တွေကို လိုက်နာပါမယ်လို့ လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နိုင်ငံ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဥပမာအားဖြင့် ဒုက္ခသည်တွေကို အလုပ်လုပ်ခွင့်မပေးတဲ့ကိစ္စဟာ လူသားအခွင့်အရေးကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက် လုပ်ဆောင်ပေးသင့်တယ်လို့ ဒီကနေ့ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ပါဝင်သူ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ရန်ဆစ်တက္ကသိုလ်၊ စီးပွားရေးဌာနရဲ့ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အနုဆွန် ထမကျိုင် (Dr. Anusorn Tamajai) က ပြောပါတယ်။
“ဒုက္ခသည်တွေ အလုပ်လုပ်ခွင့်အကြောင်း ကျနော်တို့ပြောတဲ့အခါ တကယ်ကတော့ အလုပ်လုပ်ခွင့်ဆိုတဲ့ ကိစ္စသက်သက် မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ လူသားရဲ့အခွင့်အရေးအကြောင်းပါ။ လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့တဘ၀လုံး အလုပ်လုပ်ခွင့် ရရှိသင့်ပါတယ်။” လို့ ဒေါက်တာအနုဆွန်က ထိုင်းဘာသာစကားနဲ့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒေါက်တာအနုဆွန်ဟာ USCRI က အခုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ အစီရင်ခံစာပြုစုရာမှာ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကိစ္စအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သူပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဒီမိုကရေစီရေး လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးအပြီး အာဏာသိမ်း မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ ဖမ်းဆီးနှိပ်ကွပ်မှုကို ရှောင်ရှားဖို့နဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံကို ထွက်လာကြတဲ့ မြန်မာကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံသိကျွမ်းခဲ့ဖူး၊ ကိုယ်တိုင်က ကျောင်းသားဘ၀မှာ ချူလာလောင်ကွန်းတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ ကျောင်းသားများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် စတဲ့တာဝန်တွေကို ယူခဲ့ဖူးသူပါ။ မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေ၊ ဒေသတွင်းအခြေအနေကို အဆက်မပြတ် လေ့လာနေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာကျောင်းသားအများအပြားနဲ့ သူတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံက အခြေအနေဟာ သူတွေးထင်ထားတာထက် ပိုပြီးဆိုးရွားနေတယ်ဆိုတာ သိခဲ့ရတယ်လို့ ဒေါက်တာအနုဆွန်က ပြောပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခိုင်မာတဲ့မူဝါဒ ရှိသင့်တယ်လို့ အကြံပြုခဲ့ပါတယ်။
“ဒုက္ခသည်တွေကိစ္စမှာ ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ မူဝါဒတခု မရှိဘူးဆိုရင် ဒီပြဿနာကို ရေရှည်ဆက်ပြီး ရင်ဆိုင်သွားရပါလိမ့်မယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ကြည့်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီဒုက္ခသည်ပြဿနာကို ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်တွယ်နိုင်မယ့် ခိုင်မာတဲ့မူဝါဒတခု ရှိသင့်ပါတယ်။” လို့ ဒေါက်တာအနုဆွန်က အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သူက ASEAN အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စမှာ ပါဝင်ရမယ့် အခန်းကဏ္ဍကိုလည်း ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
“ဒုက္ခသည်ပြဿနာကို ကိုင်တွယ်ရာမှာ ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ ခိုင်မာတဲ့မူဝါဒတခု ရှိရုံတင်မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတခုဖြစ်တဲ့အတွက် အာဆီယံအနေနဲ့လည်း ကူညီဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတခု ဖြစ်လာအောင်နဲ့ လူထုရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေကို လေးစားလိုက်နာလာအောင် ကူညီသင့်ပါတယ်။ ဒါမှသာ ဒုက္ခသည်ပြဿနာကို ထိထိရောက်ရောက် ဖြေရှင်းနိုင်မှာပါ။” လို့ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ရန်ဆစ်တက္ကသိုလ်က ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အနုဆွန် ထမကျိုင်က ပြောခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဒုက္ခသည်စုစုပေါင်း ၁၄ သန်းကျော်ရှိနေတယ်လို့ USCRI ရဲ့ အစီရင်ခံစာထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ စာရင်းတွေအရ နိုင်ငံအသီးသီးက ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာရောက်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ဒုက္ခသည်အရေအတွက်ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ၃၉၆,၀၀၀၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှာ ၁၇၇,၅၀၀၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ၇၅,၀၀၀ နဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံမှာ ၄၄,၇၀၀ အသီးသီးရှိတယ်လို့ USCRI ရဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားတာကြောင့် ဒီစာရင်းအရဆိုရင် စုစုပေါင်း မြန်မာဒုက္ခသည် အရေအတွက်ဟာ ၆၉၃,၂၀၀ ရှိတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံကနေ ထွက်ပြေးလာပြီး ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေထဲမှာ အများစုက ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်ပြီး မြန်မာစစ်တပ်က ရွာတွေကိုဖျက်ဆီး၊ မိသားစုတွေကိုသတ်ဖြတ် စတဲ့ဖြစ်ရပ်မျိုးတွေကို တွေ့ကြုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ထွက်ပြေးလာကြတာလို့ ဒုက္ခသည်အရေး လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးက မှတ်တမ်းတင်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း မြန်မာအစိုးရဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို အလွန်အကျူး ချိုးဖောက်တဲ့အတွက် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီကနေ အရေးယူဖို့၊ နိုင်ငံတကာတရားခုံရုံးမှာ တင်ပြီး တရားစွဲဆိုဖို့ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းမျိုးစုံက ကြိုးပမ်းနေကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်စုလွတ်မြောက်ဖို့ မဖြစ်မနေလိုအပ်ကြောင်း ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ပြင်သစ်သမ္မတ ကြေညာ
ပြင်သစ်သမ္မတ နစ်ကိုလပ်စ်ဆာကိုဇီ (၀ဲ) နှင့် ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ဂေါ်ဒွန်ဘရောင်း။ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ဂေါ်ဒွန်ဘရောင်း (Gordon Brown) နဲ့ ပြင်သစ်သမ္မတ နစ်ကိုလပ်စ် ဆာကိုဇီ (Nicolas Sarkozy) တို့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရဲစွမ်းသတ္တိနဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် အနစ်နာခံ စွန့်လွှတ်မှုတွေအတွက် ချီးကျူးတဲ့အကြောင်း အိတ်ဖွင့်ပေးစာတစောင် ဒီကနေ့ ပေးပို့ခဲ့ကြပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဦးကျော်ဇံသာက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ချစ်ခင်လေးစားရသော အောင်ဆန်းစုကြည်လို့ နွေးနွေးထွေးထွေး ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းထားတဲ့ ဒီအိတ်ဖွင့်ပေးစာထဲမှာ ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးတို့ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ထူးခြားတောက်ပြောင်တဲ့ သူရသတ္တိနဲ့ လူထုအတွက် အနစ်နာခံမှုတွေကို ချီးကျူးထားကြတဲ့အပြင် သူ့ကိုလွှတ်ပေးဖို့နဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရေးအတွက်လည်း စစ်အစိုးရကို တောင်းဆိုထားကြပါတယ်။
မကြာခင်က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲဟာ ယုံကြည်ကိုးစားဖွယ် လုံးဝမရှိဘူးလို့ ဆိုထားပါတယ်။
အရပ်သားအတိုက်အခံတွေ၊ တိုင်းရင်းသားအုပ်စုတွေရဲ့ ဘက်ပေါင်းစုံ ကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်တဲ့ နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တရပ်ကို အချိန်မဆွဲဘဲ စတင်ပြုလုပ်ဖို့ မြန်မာအစိုးရကို တောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ လက်ရှိအနေအထားဟာ ကျေနပ်စရာလည်း မရှိသလို တာရှည်တည်တံ့နိုင်မှာလည်း မဟုတ်တဲ့အတွက် သတ္တိရှိရှိ စတင်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းဖို့ လိုအပ်တယ်လို့လည်း ဆက်ပြောထားပါတယ်။
လေဘေးကိစ္စမှာလည်း လေဘေးသင့်ဒေသတွေဆီ အကူအညီပေးပို့ရေးကို စစ်အာဏာပိုင်တွေက အဆောတလျင် ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက် စိတ်ပျက်ရတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကယ်ဆယ်ကူညီရေး အဖွဲ့တွေရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုဟာ အားတက်စရာကောင်းပြီး လတ်တလော ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ရေရှည် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းတွေအတွက် ကူညီသွားမယ်လို့လည်း ဗြိတိန်နဲ့ ပြင်သစ်ခေါင်းဆောင် နှစ်ဦးတို့က တာဝန်ယူ ပြောကြားထားကြပါတယ်။
အမျိုးသမီးနိုဘယ်ဆုရှင်တွေရဲ့  ဒေါ်စုအတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်း
ဒီနေ့ ဇွန်လ(၁၉)ရက်နေ့ဟာ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ (၆၃)နှစ်မြောက် မွေးနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေး ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ဇနီး ဒေါ်ခင်ကြည် နေထိုင် မကောင်းလို့ မိခင်ကြီးကို ပြုစုဖို့ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လာခဲ့ရာမှာ ရှစ်လေးလုံး ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်ပွားချိန်နဲ့ တိုက်ဆိုင်ပြီး မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးမှာ လူထု ခေါင်းဆောင် ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အခုဆို နေအိမ် အကျယ်ချုပ်ခံထားရတာ သုံးကြိမ်မြောက်ရှိပြီး စုစုပေါင်း ( ၁၂)နှစ်တာ ကြာသွားပါပြီ။ ဒီနေ့ ကျရောက်တဲ့ သူ့မွေးနေ့မှာ ကမ္ဘာ တလွှားက မြန်မာအရေး လှုပ်ရှားသူတွေဟာ အထိမ်းအမှတ် မွေးနေ့ပွဲတွေ ကျင်းပပြီး ဆုတောင်း မေတ္တာပို့သခဲ့ရာမှာ နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် အမျိုးသမီးတွေကလည်း ဆုတောင်းပေးပို့ခဲ့ ပြပါတယ်။ အကြောင်းစုံကို ဒေါ်လှလှသန်းက တင်ပြပေးပါတယ်။
" ဒီနေ့ ကျရောက်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်မှု အပြည့်ရပါစေလို့ နိုဘယ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ခြောက်ဦးတို့ ကိုယ်စား ဆုတောင်း မေတ္တာပို့ လိုက်ပါတယ်လို့ ပြောကြား သွားသူကတော့ (၁၉၇၆)ခု နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုရှင် အိုင်ယာလန်နိုင်ငံသူ မာရိကော်ရီဂွန်မဂွိုင်းယားပါပဲ၊ သူအပါအ၀င် နောက် နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ ဂျိုဒီဝီလျှံ၊ ရှာရင်းအာဘေဒီ၊ ၀င်ကာရာမာသိုင်၊ ၀ီကို့ဘာတာမန်ချူတမ်းနဲ့ ဘက်တီဝီလျှံတို့လို အမျိုးသမီး ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်ခြောက်ဦးတို့အနေနဲ့ ဆူဒန်၊ ဒါဖေါ ငြိမ်းချမ်းရေးရှိဖို့၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း စသည်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရာမှာ တဦးတည်း နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရတဲ့ (၁၉၉၁)ခု နိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်ကို အမြဲသတိရရှိကြောင်းလည်း မစ္စမဂွိုင်းယားက ပြောပါ တယ်။ "
" ကျမတို့ရဲ့ နိုဘယ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် အမျိုးသမီး ခြောက်ဦးတို့ရဲ့ နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုရှင်တွေဆိုင်ရာ ရေးယူ ဆောင်ရွက်မှု အဖွဲ့မှာ ခုနစ်ဦးမြောက်ကတော့ အမျိုးသမီး နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုရှင်ဖြစ်သူ နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ကျခံ နေရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါပဲ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ စုစုပေါင်း နိုဘယ် ဆုရှင် အမျိုးသမီး (၁၂)ဦးသာရှိပါတယ်။ နိုင်ငံ အမျိုးမျိုးက လာကြတဲ့ ကျမတို့ နိုဘယ် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုရှင်တွေ ပုံမှန် တွေ့ဆုံကြပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆွေးနွေးကြတိုင်း နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမြဲသတိရပါတယ်လို့ မစ္စမဂွိုင်းယားက ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နေအိမ် အကျယ်ချုပ် သက်တမ်း စုစုပေါင်း (၁၂)နှစ် ကျခံနေရတဲ့ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် လွတ်မြောက်ရေး အတွက်လည်း သူတို့ အဖွဲ့အနေနဲ့ အမြဲ လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ မစ္စမဂွိုင်းယားက ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သက္ကရာဇ်(၂၀၀၃)ခု မေလက၊ ဒီပဲယင်း အရေးအခင်းအပြီး မြန်မာ စစ်အစိုးရက ငါးနှစ် နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ဆက်တိုက် ချခဲ့ပြီး မကြာသေးခင်က ခြောက်ကြိမ်မြောက် သက်တမ်းတိုးခဲ့တဲ့ အပေါ်မှာလည်း နိုင်ငံတကာနဲ့အတူ ဒေါသ ထွက်မိတယ် လို့ မစ္စမဂွိုင်းယားကပြောပါတယ်။ တည်ဆဲ လုံခြုံမှု အက်ဥပဒေအရ လူဦးကို အမှုမစစ်ပဲ အများဆုံး ငါးနှစ်ထက်ကို ဖမ်းဆီး ထားခွင့် မရှိတဲ့အတွက်လည်း အခုလို နေအိမ် အကျယ်ချုပ်သက်တမ်း တိုးလိုက်တဲ့အတွက် နိုင်ငံ တကာနဲ့ အတူ ဒေါသ ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ခုလို နေအိမ် အကျယ်ချုပ် သက်တမ်းတိုး လိုက်တာဟာ မြန်မာစစ်အစိုးရက တည်ဆဲ ဥပဒေကို ချိုးဖေါက်ရာ ရောက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အခုလို တရားမ၀င် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ချထားခြင်းခံနေရသူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမြန်ဆုံး ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်လို့ (၁၉၇၆)ခု နိုဘယ် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုရှင်က ပြောသွားတာပါ၊ အိုယာလန်နိုင်ငံမှာ ပရိုတက်စတင့်နဲ့ ကက်သလစ် ဘာသာဝင်တွေအကြား ငြိမ်းချမ်းရေး ရယူဖို့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး နိုင်ငံအေးချမ်းမှု ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကို ထောက်ပြပြီး မြန်မာ စစ်အစိုးအနေနဲ့လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးနဲ့ တိုင်းရင်းသား အုပ်စုတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး ဘေးဒုက္ခ ကြာရှည်လှတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အတွက် ဒီမိုကရေစီ ဖေါ်ဆောင်ဖို့ကိုလည်း မစ္စမဂွိုင်းယားက တိုက်တွန်း ပြောကြားသွားပါတယ်။ ဒီနေ့ အသက်(၆၃)နှစ်ပြည့်မယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ တိုင်းပြည်အပေါ်မှာအနစ်နာခံမှုကိုလည်း မစ္စမဂွိုင်းယားက အခုလို ချီးကျူးသွားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အနစ်နာခံမှုဟာ ကျမအပါအ၀င် နိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်အမျိုးသမီးတွေကိုရော၊ ကမ္ဘာ တ၀ှမ်းက လူတွေကိုရော အလွန်အားကျစေပါတယ်။ သူ့ရဲ့ သတ္တိကိုလည်း ချီးကျူပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် ပြောဆို ကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုလည်း ကျမတို့က ထောက်ခံပါတယ်။ အကောင်းဆုံး ဖြစ်လာ ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရပြီး ဒီမိုကရေစီ ရရှိတဲ့နေ့ကို စောင့်ကြိုနေပါ့မယ်လို့ မစ္စမဂွိုင်းယားက ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ ဆက်ရှိနေသည့်အပေါ် လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီက မြန်မာအစိုးရကို ဝေဖန်ရှုတ်ချ
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အခြေခံ လွတ်လပ်မှုတွေ ဆုံးရှုံးနေပြီး လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ဆက်ဖြစ်နေတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ၈ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီကနေ မြန်မာ အစိုးရကို ပြစ်တင် ဝေဖန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် တရပ် ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ မနေ့က ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဦးသားညွန့်ဦးက တင်ပြပေးပါတယ်။မနေ့ကလုပ်တဲ့ ၈ကြိမ်မြောက် လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီ ညီလာခံမှာ နိုင်ငံအလိုက် လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ တင်သွင်း ချမှတ်ရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကိုပါ ဆွေးနွေး သွားခဲ့ကြတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်လို့ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် မူကြမ်းကိုတော့ ဥရောပသမဂ္ဂကနေ တင်သွင်း သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ အချက်တွေကတော့ အရင်နှစ်တွေကထက် သိပ်မထူးခြားပဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ဆက်ဖြစ်နေတယ် ဆိုတဲ့အပေါ် မြန်မာအစိုးရကို ပြစ်တင် ဝေဖန်ထားတာပါ။ ဒီထက် ပိုတာကတော့ အခု ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ဆိုက်ကလုံး မုန်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီရေးမှာ မြန်မာအစိုးရကြောင့် နှောင့်နှေးနေရတဲ့ ကိစ္စကို ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို နိုင်ငံတကာ အထောက်အပံ့ အကူအညီတွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပေးပို့နိုင်ဖို့ ဆိုတာကို တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာ အများစုက ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနဲ့ မထူးခြားပေမယ့် မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့လည်း အရင် လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် တောင်းဆိုချက်တွေကိုပဲ လိုက်နာတာမတွေ့ရဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အဆိုပြု တင်သွင်းတဲ့ ဥရောပသမဂ္ဂ ကိုယ်စား ဆလိုဗေးနီးယားနိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ်က ပြောပါတယ်။“နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အများအပြားဟာ အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာပဲ ရှိနေဆဲပါ။ အခု ဇွန်လ ၁၉ရက်နေဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ၆၃ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ရောက်ပါပြီ။ သူမဟာ တဦးတည်း အထီးကျန် နေအိမ်မှာ အကျယ်ချုပ် ချခံထားရပါတယ်။ ဒါကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် စစ်အစိုးရက သူတို့ ပြောနေတဲ့ နိုင်ငံရေး လုပ်ငန်းစဉ်မှာ အဓိကကျတဲ့ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တွေကို ဖယ်ထုတ်ထားတယ်ဆိုတာ ရှင်းနေပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံဆန္ဒခံယူပွဲကိုလည်း ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ ကြားထဲ မှာ ကျင်းပသွာခဲ့ပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်တွေ လွတ်လပ်စွာစုရုံးခွင့်တွေ မရှိပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကပ်ဘေး ကျရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ ဒီဆန္ဒခံယူပွဲဆိုတာကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ”လို့ အီးယူ ဥရောပသမဂ္ဂကိုယ်စား ဆလိုဗေးနီးယား ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ အန်ဒရေခ်ျ လိုဂါက ပြောသွားပါတယ်။ဥရောပ သမဂ္ဂက အဆိုပြုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ ဆိုက်ကလုံး ဒုက္ခသည်တွေကို အကူအညီ ပေးသူတွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားရောက်နိုင်ဖို့ ထပ်မံ တောင်းဆိုတာပါသလို - ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာတုန်းက ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသူတွေကို အကြမ်းဖက် ပစ်ခတ် နှိမ်နင်းရာမှာ တာဝန်ရှိသူတွေကို ဖော်ထုတ် အရေးယူဖို့ကိုလည်း ထပ်မံ တောင်းဆိုထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း မြန်မာ အိမ်နီးချင်း အာရှနိုင်ငံအများစုကတော့ အခု ဥရောပ သမဂ္ဂက အဆိုပြုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ထောက်ခံမှုမရှိပါဘူး။ မြန်မာ အိမ်နီးချင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံကဆိုရင် ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စား လှယ်သစ်ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမယ်လို့ယူဆပါယတယ်။ “မြန်မာအစိုးရကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပြီး ဝေဖန်ရှုတ်ချတဲ့ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဟာ အထူးကိုယ်စားလှယ်ကြီးရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်အတွက် အနှောက်အယှက်ပဲဖြစ်စေပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီအကြား အပြသဘောဆောင်ရွက်တာကပဲ မြန်မာအစိုးရအတွက် ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံဆောင်ရွက်ရေးမှာ အဆင်ပြေပါစေမယ်။ ဒါကြောင့် အိန္ဒိယအနေနဲ့ကတော့ အခု ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ သဘောထား မပါဝင်ပါဘူး”လို့ အိန္ဒိယ ကိုယ်စားလှယ် Mr. Swashpawan Singh က ပြောသွားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စတွေနဲ့ ဆိုက်ကလုံးမုန်တိုင်း ကယ်ဆယ်ရေးကိစ္စတွေကိုလည်း နိုင်ငံရေးဖိအားတွေလို အသုံးမပြုဖို့ အိန္ဒိယအစိုးရကိုယ်စားလှယ်က မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ အလားတူလိုပါ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကလည်း လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ဝေဖန် ရှုတ်ချနေမယ့်အစား မြန်မာအစိုးရနဲ့ အပြုသဘောဆောင် ထိစပ် ဆောင်ရွက်သွားဖို့ကိုပဲ လိုလားပါတယ်။ “မြန်မာ အစိုးရအနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ရှေ့တိုး ဆောင်ရွက်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုတာကို သတိပြုမိ ပါတယ်။ ဒါကို နိုင်ငံတကာအ၀ိုင်းအ၀ိုင်းအနေနဲ့ အားပေးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီ အကြား အပြုသဘောဆောင် ဆက်ဆံတာကို လိုလားပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခု ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ သဘောထား မပါပါဘူး”လို့Ms. Erlinda F. Basilioက ပြောသွားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း တိုးတက်တာတွေ အချို့မြင်တယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ ဖွဲစည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်တာ၊ ဒါကို အတည်ပြုနိုင်တာနဲ့ ဆိုက်ကလုံး မုန်တိုင်းကယ်ဆယ်ရေးမှာ နိုင်ငံတကာနဲ့ ပူးတွဲ ဆောင်ရွက်တာတွေကို ဖိလစ်ပိုင်ကိုယ်စားလှယ်က ထောက်ပြသွားပါတယ်။ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နောက်ထပ် တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံက အယူအဆကတော့ တမျိုးပါ မြန်မာအရေးကိစ္စကို ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီအနေနဲ့ အဓိက နေရာက ကိုင်တွယ်ဖို့ လိုလားပါတယ်။ ဒီအတွက်လည်း အခုလို လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီကနေ မြန်မာ့လူ့အခွင့်အရေးတိုးတက်လာဖို့ အရှည်ကြည့်ပြီး အပြုသဘောဆောင် တွန်းအား ပေးဖို့ကို တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ “မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးအတွက် ခိုင်မာတဲ့ အချိန်ဇယား သတ်မှတ်မှုရှိတဲ့ အားလုံးပါဝင်တဲ့ နိုင်ငံရေး လုပ်ငန်းစဉ် တရပ်ရှိဖို့ဆိုတာ မလေးရှား နိုင်ငံအနေနဲ့ အမြဲတမ်း ထောက်ပြပြောဆိုပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေ သိသိသာသာ တိုးတကလာဖို့နဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေ တိုးတက်လာဖို့ နိုင်ငံတကာကလည်း မြန်မာအစိုးရကို အားပေး အထောက်အပံ့ ပြုကြဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကနေ အဓိက ကျကျ အခန်းကနေ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ မလေးရှားနိုင်ငံက အလေးထားပြောဆိုဆောင်ရွက်ပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီအနေနဲ့ အပြုသဘောဆောင်ပြီး အရှည်ကို ကြည့်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးတွေချမှတ်ဖို့ လိုလားပါတယ်” လို့ Mr. Moktar Idham Musa က ပြောသွားတာပါ။ မြန်မာ အစိုးရဖက်ကနေ အမြဲလိုလို အမာခံရပ်တည်လေ့ရှိတဲ့ တရုတ်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်ကတော့ မြန်မာအစိုးရရဲ့ အခက်အခဲ အခြေအနေတွေကို နားလည် စာနာဖို့ကိုပဲ အထူးမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ “မြန်မာ အစိုးရအနေနဲ့ အခုအသစ်ခန့်အပ်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုတယ် ဆိုတာကို ပြသခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းအနေနဲ့က မြန်မာအစိုးရရဲ့ အခက်အခဲတွေကို နားလည် ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ တည်ငြိမ်မှုတွေ တဖြေးဖြေးဖြစ်လာစေဖို့ အခြေအနေ ပတ်ဝန်းကျင် ကောင်းတွေ ဖန်တီးနေမှုကို နိုင်ငံတကာက နားလည် အသိအမှတ်ပြုပြီး အားပေးဖို့ လိုပါတယ်”လို့ Mr. QIAN Bo က ဘာသာပြန်က တဆင့် ပြောသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ အစိုးရကိုယ်စားလှယ် ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်ကတော့ အခု ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ နိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ နိုင်ငံရေးဖိအားပေးဖို့ ကြိုးစားတာလို့ အခုလို တုန့်ပြန်သွားပါတယ်။ “အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကနေ မြန်မာနိုင်ငံကို နိုင်ငံရေးအရ ဖိအားတွေ ပေးဖို့အတွက် မနှစ်ကလို ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုး ချမှတ် နိုင်ဖို့ ကြိုးစားတယ်ဆိုတာ ရှင်းပါတယ်။ မေလအတွင်းက မြန်မာနိုင်ငံတွင်း အဖြစ်အပျက်အတော်မျာများရှိခဲ့ပါတယ်၊”အခု ကာလအတွင်း မြန်မာနိုငငံအနေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာနဲ့ ကိစ္စရပ်အတော်များများမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ ရှိခဲ့တယ်။ ဒီအတွက် ဒီအခြေအနေမှာ အခုလို ဆုံးဖြတ်တာကို လက်မခံဘူးလို့လည်း ပြောပါတယ်။ ဒီလို တိုးတက်မှုတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိသာ ထင်ရှားတဲ့ ကာလမျိုးမှာ နိုင်ငံကြီးတွေက နိုင်ငံရေး ဖိအား ပေးလိုတဲ့ သဘောမျိုးနဲ့ လုပ်တဲ့ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကျနော်တို့ လက်မခံပါဘူး။ ဒီလို လုပ်မယ့်အစား နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်း အနေနဲ့က ဆိုက်ကလုံး မုန်တိုင်း ဒုက္ခသည်တွေအတွက် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ နောက် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံဖြစ်ဖို့ နိုင်ငံရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ဆောင်ရွက်ရာမှာ မြန်မာအစိုးရကို အားပေးထောက်ခံဖို့လိုပါတယ်။”ဆုံးဖြတ်ချက် မူကြမ်းတင်သွင်းတဲ့ ဥရောပ သမဂ္ဂကိုယ်စား ဆလိုဗေးနီးယား ကိုယ်စားလှယ်ကတော့ အခု မူကြမ်းမပြင်ခင် ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် အခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ ညှိုနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ ရှိခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု ဆုံးဖြတ်ချက် ကို ဥရောပ သမဂ္ဂက အဆိုပြုပေမယ့် ဂျပန်ကလွဲလို့ အာရှနိုင်ငံအများစုကတော့ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို လိုလားတဲ့ ပုံတော့ မတွေ့ရပါဘူး။
NLD members arrested while celebrating their leader's birthday
Four members of the main oppposition party, the National League for Democracy, have been arrested in Burma on the sixty-third birthday of their leader, Aung San Suu Kyi.
She remains confined to her lakeside home in Rangoon, after the ruling generals extended her detention forasixth consecutive year.
A BBC correspondent in the region says the Burmese military's refusal to release Aung San Suu Kyi, or even talk to her, suggests they still fear her popularity.
One of the party members participating the ceremony told how government back gang attack to them in front of the NLD headquarters.
A NLD spokeperson said the members of pro-government group, Swan Arr Shin, have attacked and conducted the arrests.
He also pointed out this kind of arresting people was totally outlaw.
Analysis on this event infront of NLD HQs by U Aung Naing Oo.